‘गोर्खा स्मारक’ किन? – Gurkha Army Ex-Servicemen's Organisation GAESO
You Are Here: Home » अन्तर्वार्ता » ‘गोर्खा स्मारक’ किन?
Posted by: admin Posted date: February 04, 2013 In: अन्तर्वार्ता | comment : 0
आन्दोलको एउटा रुप स्मारक निर्माण ‘गोर्खा स्मारक’ किन?
करीब दुइ सय बर्षसम्म गोर्खालीहरुलाई बेलायत सरकारले शोषण र बिभेद गदै आयो। लाखौ गोर्खालीहरुले बिट्रिश साम्राज्य जोगाउन रगत र पसिना बगाए र बगाउदै आएको छ। विश्व युद्धताका बिट्रिश साम्राज्य रक्षाका लागि लड्दा हजारौ गोर्खालीहरु मारिए, घाईते भए, बेपत्ता भए। तर, युद्धपछि बेलायत सरकारले उनीहरुको हितमा केही पनि काम गरेन। बरु गोर्खालीहरु माथिको बिभेद र शोषणलाई जारी राख्ने काम गर्यो। यो वा त्यो नाममा बेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई पशुवत व्यवहार जारी राख्यो।
युद्धमा मारिएका ती गोर्खालीहरुलाई सम्मान गर्नुको साटो अपमान गरियो। युद्धमा कति मारिए, कति बेपत्ता भए, कति घाईते भए? त्यसको कुनै तथ्याङक बेलायत सरकारसंग छ,न नेपाल सरकारसंग नै छ। बेच्न लगिएको पशुको समेत तथ्याङक राखिन्छ तर मान्छेको किन राखिएन ? पशु बेच्दा पनि केही मापदण्ड तयार गरिएको हुन्छ। तर, गोर्खाहरुलाई किन युद्धमा पठाईयो, किन भर्ती गरियो। यसका कुनै नीति विना नै बेलायतले भर्ती गरेको छ र युद्धमा पठाएको छ । बेलायतले किन नीति बनाएन? यो प्रश्नको उत्तर अहिले हामी बेलायत सरकारसंग मागिरहेको छौ। विना नीति लगेर मारिएका हजारौ गोर्खाहरुको सम्मान र सम्झनामा स्मारक बनाउन लागेका हौं।
२) गेसोले भर्खरै नयाँ चरणको आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ, फेरी किन स्मारक तिर लाग्नुभयो ?
-हो, गेसोले फेरी नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आन्दोलन अन्तर्गत नै यो निर्माण गर्न लागेका हौ। हामी स्मारकमार्फत संसारलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउन खोज्ने बेलायत आफैले चाहि कसरी मानवअधिकारको धज्जी उठाएको रहेछ भन्ने सन्देश यही स्मारकबाट दिनेछौ। यो स्मारक हेरिसकेपछि बेलायतको सक्कली अनुहार थाहा पाउनेछ।
३) स्मारकबाट कसरी बेलायतले गोर्खामाथि गरेको बिभेद बारे जानकारी पाउछ ?
-स्मारकमा हामी गोर्खा भर्ती, गोर्खाले लडेका युद्ध, त्यसपछि गोर्खाहरुको अवस्था र बेलायत गरेको शोषण र बिभेदको झल्किने कक्षहरुको निर्माण गर्नेछौ । साथै स्मारकमा लेखिने शिलालेखामा स्पष्ट रुपमा बेलायतले गोर्खामाथि गरेको शोषण र बिभेदको बारेमा पनि उल्लेख गर्नेछौं।
४) स्याङजामा स्मारक निर्माण हुनेभएपछि स्थानीयवासी उत्साही छन्। स्थानीयहरुलाई कस्ता फाईदा हुनेछ?
-निश्चय नै स्याङजमा गोरखा स्मारक हुनु स्थानीवासीहरुको लागि खुसीको खबर हो। संसारको ध्यान तान्ने स्मारक बन्न लाग्दा स्थानीयहरु उत्साही हुने नै भए। पहिलो कुरा त मृत्यु भएका गोर्खाहरुको सम्झनामा आफ्नो गाउंमा स्मारक बन्नु गर्वको कुरा हो।
दोस्रो निर्माणपछि संसारभरका मान्छेहरु स्मारक हेर्न आउनेछन्। त्यसबाट ठूलो पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास पनि हुनेछ। पर्यटकहरु आउनेभएपछि पर्यटन उद्योगबाट यस क्षेत्रका सर्बसाधरणहरुको आर्थिकस्तर पनि माथि उठ्नेछ।
५) कति बर्षमा निर्माण पूरा हुनेछ?
-सिमेन्ट्री एक बर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्नेछौ। र बिभिन्न जातजाति र आदिवासी जनजातिका संस्कृति र सम्भता झल्किने घरहरु दुइ बर्षमा निर्माण गरिसक्नेछौ। बढीमा तीन बर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
६) स्मारक निर्माणका लागि कति खर्च लाग्छ र त्यो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ?
-करिब १० देखि १५ करोड रूपैयाँले निर्माण पूरा हुनेछ। त्यो पैसा हामी हाम्रै गोर्खा दाजुभाईबाट उठाउनेछौ । बेलायत र नेपाल सरकारबाट एक पैसा पनि लिन्नौ। गोर्खाहरु कसैको भरमा नपरी आफै गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हामी प्रस्तुत गर्नेछौ।